गुल्मीबाट आयो बागलुङ रिघाको यस्तो डरलाग्दो खबर ! स्थानिय तहमा राणा शासनको सजायँ ! – ebaglung.com
२०७५ असार ५, मंगलवार १९:२२	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ असार ५ । गणतन्त्रको उदय पछि लोकतन्त्र संस्थागत गरिदै छ र गाउँ गाउँमा सिंहदरवार आयो भनिदैछ । ती गाउँ गाउँ सिंहदरवारहरुले राणाकालीन न्याय–निसाफको झल्को दिने गरेको हामीलाई प्राप्त समाचारले स्पष्ट पारेको छ । त्यही राणाकालीन शासनकालको झल्को दिएको छ गुल्मीको छिमेकी जिल्ला बागलुङको एक वडा कार्यालयमा भएको घटनाले ।
उनिहरु माईती चेलीका आफन्त थिए । दिलमाया बिक भाई वुहारी हुन भने खगी बिक नाताले अमाजू हुन । माघ २८ गते आईतबार राति उनिहरु बिच भनाभन भएको विषयमा आरोप लागेपछि ७ दिन पछि दुवै पक्षलाई जुटाएर वडा कार्यालयमा मिलापत्र गराईएको थियो ।
उक्त मिलापत्रमा वडाध्यक्ष डम्वर बहादुर श्रीसको रोहवरमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रका सहजकर्ताहरु बसेर खगी बिक माथी लगाईएको आरोप सरासर गलत भएको र दिलमाया बिकले लगाएको आरोप झुुटो भएको ठहर गर्दै क्षमयाचना गराउँदै आगमी दिनमा यस्तो भनेको सुन्नमा आए यसै कागजले पटके कार्वाही गर्ने उल्लेख छ ।
माघ २८ गते भएको घटनामा ७ दिन पछि मिलापत्र भएको छ । फेरी त्यसको ७ दिन पछि खगी बिकले उनै भाई बुहारी विरुद्ध लेनदेनको उजुरी गरे पनि दोश्रो मेलमिलापमा समेत त्यसै २६ गतेको मिति राख्दै एउटा यस्तो कागज गरिएको छ ज्ुन कागज हेर्दा जनप्रतिनिधीहरुले जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने महसूस हुन्छ ।
दिलमायाका श्रीमान यमबहादुर बिक बैदेशिक रोजगारका लागि कतारमा रहेको बेला उनलाई गाउँको ठुलो हिस्सालाई उठाएर उनको घर घेर्न गईयो, दिलमाया भक्कानिदै भन्छिन्–‘ मलाई केहि पनि थाह छैन, मलाई सप्पै आएर घर घेरे । मेरा छोरा छोरी पनि आत्तिए । धेरैका सामु केहि लाग्दो रहिन्छ । छोरा छोरी सहित म गएँ । वडा कार्यालय भित्र दिनै भर राखेर अमाजू र उहाँका श्रीमान अमाज्ू दाईले हुक्नु हुके । सवैलाई एकोराई सकेका रहेछन् ।
छोरा छोरी माथी हातपात भयो, मुखमा थुकियो, उहाँहरुले कालोमोसो लगाउँदै जुत्ताको माला लगाउँदै गाउँ घुमाउँछौ भने । त्यहाँ त्यसो गर्न हुँदैन भनेर मेरो पक्षमा वोलि दिने वडाध्यक्ष डम्मर सर रिमे वाजे र र मेरी सम्धीना मात्रै हुनुहुन्थ्यो । मैले के नै गल्ती गरेकी छु र ? भनेर भन्दा अमाजु दिदी र दाजु, उहाँका छोरा छोरीले समेत हातपात गर्न खोजे ।
मलाई खुट्टा ढोगाउन लगाईयो, म वाहिर निस्कें, त्यही बेलामा अमाजु दाईले मलाई पछाडीबाट समात्नु भयो । त्यही बेलामा अमाजुले कालोमोसो दल्न सुरु गर्नु भयो । साँझ परी सकेको थियो । मैले कसैबाट गुहार पाईन । त्यहाँ वडा सदस्य रुपा बिक, डम्मर श्रीस पनि थिए । त्यस अघि मलाई तेरो श्रीमानले लगेको ऋण भन्दै कागजमा सईन ( हस्ताक्षर ) गर्न लगाए ।
उहाँले ऋण लिएको भए उहाँ आएरै हिसाव किताव गर्नुस् भन्दा पनि मेरो कुरा सुन्ने वडाध्यक्ष, रिमेवाजे बाहेक अरु कोही भएनन् । मलाई कालो मोसो दलेर पनि जुत्ताको माला लगाई दिन खोजेका थिए । त्यही वेलामा एक जनाले त्यो जुत्ताको माला थुतेर फाली दिए । मेरी छोरी र छोरालाई पनि कालो मोसो लगाउन खोजियो । म तिन दिन सम्म आँखा हेर्न सकिन । आत्मा हत्या गरेर मरुँकी जस्तो लाग्यो । म अहिले पनि रोएर बसेकी छु । मैले न्याय पाउन सकिन ।
दलित समुदायको तर्फबाट वडा सदस्य हुँदै जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य समेत रेहेकी रुपा बिक संग सम्पर्क राख्दा दुवै पक्षलाई राखेर मेलमिलाप गरिएको बताईन । दिलमाया संगै उनकी छोरीलाई समेत कालोमोसो दल्न खोज्दा बचाएकी सदस्य बिकले हिसाव किताव गर्ने बेलामा दुवै पक्ष राजी भएरै कागज गरिएको दावी गरिन ।
गल्कोट नगरपालिका उपमेयर रेनुका काउचाको ध्यानकृष्ट गराउँदा उनले यस विषयमा फेरी दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरिने बताईन । उनले भनिन–‘ त्यो परिवारले तपाई सञ्चारकर्मीलाई जस्तै म संग गुनासो गर्दै आएका छन र म पनि पुनः छलफल गरेर मेलमिलाप गराउने पक्षमा छु । छिट्टै यसवारे पहल गरिनेछ । ’
साँवा ब्याज गरेर २ लाख ९७ हजार ९८ रुपैयाँ दिलमायाबाट असार मशान्त भित्र अशुल्ने कबुलियत बनाईको छ । खगी बिकका श्रीमान श्याम बहादुर बिक भारतीय सेनाका अवकास प्राप्त ब्यक्ति भएकोले उक्त दिनको छलफलमा उनले भनेको कुरा सहभागी एक महिलाले सुनेको बताउँदै भनिन – ‘मलाई पैसाको मतलव छैन, यसलाई कालोमोसो दलेर जुत्ताको माला लगाउँदै गाउँ डुलाउन दिए पुग्छ ।’ यस बाट आर्थिक चलखेल भएको आशंका समेत दिलमायाका परिवारले गरेका छन् ।
वडाध्यक्ष श्रीस संग सम्पर्क राख्दा हिसाव कितावको जुन कागज गरिएको छ, त्यो आफुले नमानेर हस्ताक्ष््रार समेत नगरेको बताए । हिसाव कितावको कुरा उनका श्रीमान आएर मात्र गर्नु पर्छ भनेर म उठेको हुँ, त्यसैले मैले पनि त्यस कागजमा हस्ताक्षर गरिन र अरु जनप्रतिनिधीहरुले पनि नगरेका हुन् उनले भने–‘ हिसाव कितावमा उनि माथी अन्याय भएको पाईए फेरी छलफल गरेर मिलाईने छ वा उनिहरुलाई चित्ता नबुझे अदालतमा समेत जान सक्ने बताए । ’
यो समाचार तयार पार्ने क्रममा वडाध्यक्ष सहितका विभिन्न ब्यक्तिहरुलाई टोलिफोन सम्पर्क राखे पछि तत्काल उनै दिलमायालाई वडा कार्यालयमा बोलाएर फेरी थर्काउन थालेको समाचार प्राप्त भएको छ ।
हाम्रो गोप्य श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार वडाध्यक्ष डम्वर श्रीसले ती महिलालाई –‘ए तैले पत्रकारकहाँ कु्रा पुराउने ? अव तँ पुलिस कहाँ जान्छेस भनेर त्रसाउँदै छन । उनले अरु के के भनेर ती एक्ली महिलालाई त्रसाए त ? त्रसाउनुको कारण के हो ? रहश्य के छ हामी थप फ्लोअपमा छौ । ’
तस्वीरःहेरौ यो गणत्रन्त्रको युगमा राणाकालिन महाराजहरुले जस्तो गरिएको को जस्तो कागजपत्र